Malunga nathi - iYantai Jiajia Instrument Co., Ltd.
YANTAI JIAJIA Izixhobo CO., LTD.
Yantai Jiajia Instrument Co., Ltd uphando oluqhubekayo kunye nokuphuhlisa iiteknoloji ezintsha kushishino zalishumi. Ngokusekwe kubuchwephesha obutsha, obuchanekileyo nobuchanekileyo, uJiajia uzama ukudala elona qela libalaseleyo nelingcali, ukuvelisa iimveliso ezikhuselekileyo, eziluhlaza, ezinobungcali nezichanekileyo. Injongo yomnikezeli womgangatho weemveliso ezinobunzima.
Iinkcubeko zenkampani “Iinkcukacha zenza umahluko. Isimo sengqondo sithatha isigqibo ngayo yonke into. ” , Ukusebenza okuqhubekayo kukaJiajia kukungabinaziphene kumgangatho wemveliso, akukho mgama kwinkonzo, akukho zikhalazo zabaxhasi njengenjongo.
Ulawulo olungqongqo lwenkqubo yokuvelisa kunye neemveliso ezigqibeleleyo, uJiajia uya kubonelela ngenkonzo ethembekileyo nethembekileyo, unxibelelwano olunyanisekileyo kwaye uzame ukuba ngumhlobo wabo bonke abathengi. Ngesimo sengqondo esinzulu nesigqibeleleyo, uJiajia uya kuba ngumzekelo kushishino lobunzima.
UJiajia ukhethekileyo kwi-R & D, imveliso kunye nentengiso yeemveliso ezinobunzima kubandakanya izikali zelori, ubunzima bovavanyo, inkqubo yokulinganisa ubunzima.
Zonke izikali zeshishini kuzo zonke iisayizi kunye neefomathi, isoftware yokulawula kunye nokujonga inkqubo yokuvelisa inokufumaneka apha. Kuyanceda ukuphucula imveliso kunye nomgangatho ngohlobo ngalunye lwesisombululo njengokuqulunqwa, ukubala kunye nolunye usetyenziso.
Iimveliso zethu zingafunyanwa kuhlobo ngalunye lweshishini njengokupakisha, ulungiselelo, eyam, amazibuko, imveliso, elebhu, ivenkile njl.
Iminyaka engama-20 yamava emveliso kunye neenjineli zobuchwephesha, iJIAJIA inokuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi kwiimveliso ezisemgangathweni kunye neemveliso ezizenziweyo.
Phantse iminyaka engama-20 yamava orhwebo lwangaphandle, aqhelene nenkqubo yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kunye neemfuno, anokukunika ingcebiso kunye nezimvo zobungcali.
Amaqela okuthengisa abaqeqeshiweyo ngeelwimi ezi-8 ezahlukeneyo anokunxibelelana nabathengi ngaphandle kwezithintelo. Olula ngakumbi, olukhawulezayo noluchanekileyo lokuqonda iimfuno zabathengi
UkuLungiswa kweMisa, Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital, Isikali sokulinganisa sokulinganisa, Ishedi ye-Shear Bead Cell, UkuLungiswa koBunzima beSeti, Ubunzima obuqinisekisiweyo,